Swat 4: Portable Edition For PC Game( 770Mb ) ဖိုင်ခွဲ (8) ဖိုင် | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Swat 4: Portable Edition For PC Game( 770Mb ) ဖိုင်ခွဲ (8) ဖိုင်
Posted on November 11, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	သူငယ်ချင်းတို့အတွက် Swat 4: Portable ဂိမ်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းဒါလေးရရခြင်းဒေါင်းပြီးဆော့စ်နေတာနဲ့ တင်ဖို့နောက်ကျသွားတယ်။ အင်စတော လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ အထဲကဖိုင်လေးဖွင့်ပြီးတာနဲ့ ကြိုက်တဲ့နေရာ ၊ ကြိုက်တဲ့စက်မှာ ကစားလို့ရတဲ့ Portable လေးပါ။ရုပ်ထွက်ကတော့ပြောစရာကိုမလိုတော့ပါဘူးကြည်နေတာပဲ။ မြေပုံကြည့်ပြီးရန်သူရှိသလောက်ကိုနှိမ်နှင်းတဲ့အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းပေါ့ဗျာ။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 770 Mb ရှိတာကြောင့် ဖိုင် ( 8 )ဖိုင်ခွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖိုင်တစ်ဖိုင်မှ (100Mb)ပဲရှိပါတယ်။ ဖိုင်တွေဘယ်လိုဖြည်ပြီး အထဲကဘယ်ဖိုင်ကိုဖွင့်ရမယ်ဆိုတာ ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာပုံတွေနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။
Swat 4: Portable EditionEnglish | Extract To Play | Size: 777 MBMinimum System RequirementsSystem: Pentium III 1.0GHz / Celeron 1.2Ghz / Athlon 1.2 GHz or equivalentRAM: 256 MBVideo Memory: 32 MBHard Drive Space: 2000 MBRecommended System RequirementsSystem: 2.4 GHz Pentium4/ Athlon XP 2500+ or equivalentVideo Memory: 128 MB
Download Swat 4: Portable Edition ( 770Mb ) Swat 4: Portable Edition Part 1 Swat 4: Portable Edition Part2Swat 4: Portable Edition Part3Swat 4: Portable Edition Part4Swat 4: Portable Edition Part5Swat 4: Portable Edition Part6Swat 4: Portable Edition Part7Swat 4: Portable Edition Part 8 ဂိမ်းဖိုင်တွေဖြည်နည်း နှင့် အင်စတောလုပ်နည်းဒေါင်းရန်(10Mb) www.mm-knowledge.com နည်းပညာမြို့တော်
This entry was posted in games, PC games. Bookmark the permalink.
← Samsung Galaxy S3 Gt-I9300 ကို Android Version – 4.3 တင်နည်း နှင့် Offical Firmware Download link	အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (14) အမှတ် (44) (11.11.13) →